Nagarik News - ग्यास सिलिन्डर चुहिएपछि...
जलेका मध्ये भारतको बिहारका चटपटे व्यवसायी २५ वर्षीय बिभु पण्डितको बिहीबर नै मृत्यु भयो। उनको कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार गर्दा–गर्दैै बिहीबर मृत्यु भयो । साठी प्रतिशतभन्दा बढी भाग जलेकोले उनको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। 'छाला बैकमा छाला भएको भए बचाउने कोशिस गर्न सकिन्थ्यो, जुन कुरा छैन,' डा.कार्कीले भने । घाइते पण्डितको अनुहारसहित अन्य भाग गहिरो गरी जलेको थियो।
बाँकी पाँच जनाको राजधानीको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्तिबाल र कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। मृतक पण्डित बलामीले ग्यास जोडिरहेको स्थान नजिकै भएकोले बढी जलेको अन्य घाइतेहरुले बताए। 'उहाँ भित्र हुनुहुन्थ्यो र हामी बाहिर थियौ, केले पोल्यो पत्तै पाएनौं,' ट्रमा सेन्टरमा उपचारर्थ राजेश सिंहले भने।
घाइतेहरुको अनुसार भित्रबाट निस्केको मुस्लोले बाहिर उभिएका पाँच जनालाई पोल्दै पर्खालमा ठोक्किएको थियो र पुन भित्रै फर्किएको थियो। मृतक पण्डित सहित घटनामा पर्नेहरु ६ जना भारतीय र एक जना नेपाली नागरिक छन्।
नेपाली घाइते सुरेन्द्र बलामी टेकुस्थित सुगम ग्यासका कामदार हुन्। उनी ग्यास पुर्याएर जोड्ने क्रममा घाइते बनेका हुन्। ग्यास जोड्ने क्रममा संगै रहेका टहराका बिभु पण्डित भित्रै रहेकोले बढी जलेर मृत्यु भएको हो। घाइते मध्येका राजेश सिंह भने त्यो दिन साथी भेट्न त्यहाँ पुगेका थिए।
सुरेन्द्र बलामीबाहेक अन्य घाइतेहरु भारत बिहार घर भई हाल कालीमाटीको टहरामा बसेर चटपटे व्यवसाय अपनाउँदै आएका आएका थिए। जसअनुसार भारत बिहारका बीस वर्षीय रोहित कुमार,२८ वर्षीय राजेश सिंह, १५ वर्षीय उमेश पण्डित,लक्ष्मी कुमार वर्ष २२,राजेश सिंह–२८ र दुई वर्षीय बालक अनमोल सिंह घाइते राजेश सिंहका छोरा हुन्।
संगै रहेका दुई चटपटे टहरा मध्ये सानो टहरामा घट्ना भएको थियो । टहरामा बस्ने अधिकांश व्यवसायी घरमा गएकोले क्षति कम भएको घाइतेहरुले बताएका छन् । त्यो टहरा भित्रका चार कोठामा जम्मा ५० जना चटपटे व्यवसायी बस्दै आएका थिए।
घाइते मध्ये राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपचारर्थ चार जनाको अवस्था सामान्य रहेको सेन्टरका वर्न वार्ड प्रमुख डा. पियुष दाहालले बताए। 'यहाँ उपचार भइरहेका सवै तीस प्रतिशतमुनि जलेका छन्, उनीहरुको अवस्था सामान्य छ,' डा.दाहालले भने। कान्तिबाल अस्पतालमा कउपचारर्थ दुई वर्षीय बालक अनमोल सिंहको अवस्था पनि सामान्य रहेको जनाइएको छ। सेन्टरमा उपचारर्थ घाइतेहरुको सवै जसोको घुँडादेखि तलको भाग, हात र अनुहारको भाग जलेको छ।
कम्पनीबाटै चुहेको सिलिण्डर ल्याइएकोले घटना सिलिण्डरकै खराबीको कारण भएको घाइतेहरुले बताएका छन्। 'कम्पनीकै व्यक्ति आएर जोड्दै थिए, एक्कासी घटना भयो,' वीर अस्पतालमा उपचारर्थ घाइते रोहित कुमारका भाई दिनेश कुमारले भने। 'जोड्न नपाउँदै घटना भएको छ, चुहेको सिलिण्डर ल्याइएको रहेछ,' घाइते रोकश सिंहले भने।
कम्पनीकै कमजोरीको कारण सात जनाको जीवन बरबाद भएको भन्दै उनीहरुले कम्पनीले घाइतेहरुको सम्पूर्ण उपचार गर्नुका साथै क्षतिपूर्तिसमेत दिनु पर्ने माग गरेका छन्। 'हाम्रो अनुहार जिन्दगीभरलाई बिग्रियो, हातखुट्टा अंगभङ्ग भयो, हामीलाई क्षतिपुर्ति चाहिन्छ,' रोकशले भने।
अस्पतालमा ग्यासका घाइतेहरु आएको यो पहिलो घटना होइन। जेठ सात गतेको घटनामा ललितपुर इंताछेमा तामा पित्तलको कारखानामा काम गरिरहेका तीन जनाको ज्यान गयो। कारखानाका सुरेश ताम्राकार, ध्रुव र रोजेश ताम्राकारको मृत्यु भएको थियो। उनीहरु मध्ये दुई जनाको कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार हुँदा–हुँदै मृत्यु भएको थियो। एचपी ग्यासको सिलिण्डर पड्किंदा उनीहरुको ज्यान गएको थियो। अहिले मृतकका आफन्त तथा पीडित परिवार ग्यास कम्पनीबिरुद्ध संघर्षमा उत्रिएको छ।
वर्षेनी सिलिण्डर चुहिएर, ग्यास स्टोभको बिग्रेको, सिलिण्डरको वासर नभएको र स्वयं सिलिण्डर नै धेरै पुरानो भएको कारणले ग्यास दुर्घटना भई दर्जनौं घाइतेहरु अस्पताल पुग्ने गरेको सम्वन्धित अस्पतालले जनाएका छन्। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर बर्न बिभागकाअनुसार यो अस्पतालमा वर्षेनी औसतमा यो अस्पतालमा मात्र ३० जना ग्यासकै कारण जलेर आउँछन् । वर्षभरी आउने बिरामी मध्ये १० देखि १५ प्रतिशत ग्यास घटनाका बिरामी हुने गरेको कीर्तिपुर अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालमा गत वर्ष मात्र १ सय ८० जना जलेका बिरामी उपचारका लागि आएका थिए। टिचिङ अस्पताल महाराजगंजले भने ग्यास घटनाका बिरामी यो अस्पतालमा कम मात्रै आउने गरेको जनाएको छ। 'हामी कहाँ वर्षेनी एक/दुई प्रतिशत मात्र ग्यास लिए भएर जलेका आउँछन्,' अस्पतालका वर्न बिभाग प्रमुख डा.ईश्वर लोहनीले भने।
ग्यास कम्पनी, रेगुलेटर र प्रयोगकर्ता दुबैमा कमजोरीः चिकित्सक
बिकसित राष्ट्रमा खाना पकाउने ग्यासको कारण कम मात्रामा घटना हुने गरेकोमा नेपालमा यसको दर अहिले पनि बढी भएको भन्दै बर्न चिकित्सकहरुले कम्पनी र उपभोक्ता दुवैको कमजोरीको कारण भएको जनाएका छन्।
चिकित्सकका अनुसार केही घटना पुरानो सिलिण्डर बितरण गरिएकोले हुने गरेको छ, धेैैरै कमजोर रेगुलेटरको कारण र तेस्रो उपभोक्ताले पुरानो तथा मर्मत नगरी ग्यास स्टोभको प्रयोग गर्नाले यस्ता घटना हुने गरेका छन्। 'तीमध्ये बढी बजारमा अहिले पनि भारतीय कम्पनीका नक्कली रेगुलेटर छन्, यस्ता रेगुलेटरका कारण ग्यास लिक भई धेरैको ज्यान लगको देखिन्छ,' राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका बर्नप्लास्टिक सर्जन डा.पियुष दाहालले भने।
कीर्तिपुर अस्पालका वर्नप्लास्टिक सर्जन डा. बिशाल कार्कीले अहिले बजारमा डेनमार्कबाट आएको रेगुलेटर प्रयोगको लागि सुरक्षित रहेको सुझाए। 'अहिकति महंगो छ तर ग्यासको लिकेजबाट बचाउँछ,' उनले भने।
सरकारले ग्यास कम्पनी र रेगुलेटरको बजार अनुगमन र सुरक्षा प्रणाली नअपनाउँदा अहिले पनि खाना पकाउने एलपी ग्यासको कारण ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था रहेको जनाए। कम्पनीको सिलिण्डरमा प्रयोग अवधिको मिति राखिनु पर्ने, वासरको राम्रौसंग जाँचपड्ताल गरेर मात्र बजारमा पठाउनु पर्ने, सरकारले भरपर्दौ रेगुलेटर मात्र बिक्रीको लागि अनुमति दिनु पर्ने जस्ता सावधानी अपनाउनु सकेमा मात्र ग्यास घटनाबाट बच्न सकिने डा. दाहालको सुझाव छ।
ग्यास कम्पनी मात्र नभएर उपभोक्ता पनि उत्तिकै सचेत हुनको लागि डा. दाहालले सुझाएका छन्। जसअनुसार सिलिण्डर र चुलोको दूरी टाढा हुनु पर्ने, रेगुलेटरको अवस्था बारे सँधै सर्तक हुनु पर्ने, बिग्रेको स्वीचको ग्यास स्टोभ प्रयोग नगर्ने, ग्यासको पाइप बेला–बेलामा फेरेर नयाँ राख्नु पर्ने र एकैठाउँमा धेरै ग्यासका सिलिण्डर भान्छाभित्र राख्न नहुने उनको सुझाव छ।' एउटाको कारण अन्य सिलिण्डर पनि पड्केर ठूलो आगालागी हुन सक्ने भएकोले सकेसम्म भान्छा कोठाभित्र धेरै सिलिण्डर राख्नु हुँदैन,' डा. दाहालले भने।
ग्यास चुहिएको छ भने सलाई बिना पनि आगालागी हुने भएकोले सकेसम्म सिलिण्डर खुल्ला ठाउँमा राख्ने र भान्छामा राखिहालेमा झयाल खुल्ला राख्नु पर्ने सुझाव छ।
ग्यास दुर्घटनाबाट बच्न के गर्ने ?
–खाना पकाएपछि रेगुलेटर बन्द गर्न नभुल्ने
–रेगुलेटर चुहेको छ कि भनेर बेला–बेलामा जाँच गर्ने
–सिलिण्डरमा वासर छ कि छैन राम्रोसंग हेर्ने
–सिलिण्डर र चुलोको दूरी टाढा राख्ने
–सिलिण्डर राखिएको कोठाको झयाल संधै खुल्ला राख्ने
–सिलिण्डर गुडाएर लैजाने नगर्ने
–बेला–बेलामा ग्यास स्टोभ मर्मत गर्ने
–ग्यास चुहिएको थाहा पाउनेबित्तिकै ग्यास कम्पनीलाई खबर गर्ने
छाला बैंक रित्तै, दुई वर्षमा चार जनाले गरे छाला दान